Koorsooyinka Fikradaha - Geofumadas
Koorsada BIM - Habka isku dubaridka dhismaha
Fikradda BIM waxay ku dhalatay qaab lagu jaangooyo xogta iyo hawlgalka qaab dhismeedka, injineernimada iyo dhismaha. In kasta oo ku-dhaqankeedu ka baxsan yahay deegaankan, haddana saameynteeda ugu weyn waxaa u sabab ah baahida sii kordhaysa ee isbeddelka qaybta dhismaha iyo soo-jeedinta hadda jirta ee kala duwan ...
BIM Koorsooyinka Fikradaha
Soo ogow awoodda dareenka fog. Tijaabi, dareemo, falanqee oo arag waxa aad samayn karto adigoon meesha joogin. Dareenka fog ama Dareenka Fog (RS) waxaa ku jira farsamooyin go'an oo loogu talagalay qabashada fog iyo falanqaynta macluumaadka noo oggolaanaya inaan ogaano dhulka annaga oo aan joogin. Baaxadda xogta indho -indheynta Dhulka ...
Koorsooyinka - LandWorks Koorsooyinka Fikradaha